Hargaysaay Anaa Kaa Hurda. W/Q: Cabdirisaaq Axmed Cigaal (Darwiish)
Thursday May 21, 2020 - 09:11:07 in Articles by Hadhwanaag News
Taariikhdu waa isa sudhan, waa tilaan wax warisa oo dadku ku gaajo baxo.
Faaidooyinka ugu weyn ee taariikhda laga faaidana waa in aynu baro sunayaasha dunidan eebe weyne u dhigay oo ku cibro qaadano gadgadoonka meertada nolosha aadmiga.
· Haweenkiyo caruurtaad lahayd lama halgaadeene
· Hablahaaga muu guursadeen haybti garanwaaye
· Hog dalluuna kama qayliyeen hanadadaadiiye
· Hanuunshiyo indheergaratadii hode ma dhaafeene
· Hadhaa laguma sheegeen raggii noo horrayn jiraye
· Hoos looma eegeen kuwii hawlkarka ahaaye
· Hoosaasiyaal uma shireen horumarkaagiiye
· Maad hoos dhigteen labada sacab hooge baadiyahe.
· Habro looma doorteen golihii haybadda lahaaye
· Hiirtaanyo iyo ciil wadnuhu ima hiqleeyeene
· Haasaawaha iyo sheekadii lama hagoogteene.
· Ninna hadalka kama dhawrsadeen kuu hagaag bido'e
· Hootada afaysani boqnaha igama heerteene
· Dhammaan hooballadi may qaxeen hibadu saarrayde
· Hogyaqaanadaadii murtida lama halleyeene
· Heesaagi lama quudhsadeen hiray cadaawaaye
· Hayeeshee habeen guulleh baad heli ayaan dhow'e
· Had aan sii fogeyn waxad sugtaa heego iyo roobe